Ukubulawa kabini kukaGina noMarinin ePathé cinema Groningen: Martin Vrijland
"Ndothuke nyani. Into enje yenzeka kwi-cinema, indawo apho wonke umntu uhlala khona ukuze abukele imovie. Ayothusi le nto.Le yindlela abasabela ngayo uceba wedolophu uMarjet Woldhuis wenxalenye yebhunga le-100% Groningen. Kananjalo isiphumo sokukhwankqisa esifunekayo ukuze sikwazi ukusebenzisa umthetho omtsha ukuba siphinda sijongana ne-PsyOp elandelayo. Ewe kunjalo akunakuthethwa; Awungekhe uyicinge loo nto. Yinto embi leyo kwabo bafelweyo kunye nomkhosi wetroll (ohlola iingxoxo zosasazo lwentlalo) uya kuziphosa kuwe. Kweli xesha lobuchwephesha bokunzulu, kufuneka sithembele ukuba asidlalwa ngurhulumente kunye nemithombo yeendaba ukusazisa ngemithetho ebingasoze yamkelwe.
Ngexesha elidlulileyo bekukho intetho yomthetho apho abantu banokuthi bavalelwe ngaphandle kungenelelo lwejaji okanye ugqirha wezengqondo. Uxwebhu lwezikhalazo oluvela kule ndawo kunye nokunye ukuxhathisa okuvela kuluntu ngelo xesha kwenza igumbi lesibini lombutho wabadlali mthetho isuka ku-Edith Schippers. Ixesha lalingekafiki. Abantu kuqala kufuneka babone isidingo. Ukuba i-Ruinerwold 'i-ghost yosapho' ikhokelele ekususweni kombundu ukuze ikwazi ukujonga ngasemva komnyango ngamnye nanjengoommelwane okanye abahlobo kungekudala Ingqondo bavunyelwe ukufowuna kwaye le bhili iyamkelwa, wonke umntu unokuphela kwiziko le-GGZ kwaye angaze abuye. Kuba apho unokuphoselwa kwisisele esikhethekileyo ngaphandle komhlaba wokujonga kwaye ufumana amayeza athile ukuba aqwalaselwe ukuze ubone ukuba uyahlanya.
"Ewe kunjalo, kodwa iVrijland. Oku kubulala kwenzeka nyani. Ndiyabazi abantu abahlala kufutshane.","Ndabazi abantu ngokobuqu","Ndinabahlobo abahlala ecaleni kwabo","Ndiyabazi abantu ababengogxa babo","Ndiyayazi usapho","kukho amazwi ovelwano","Kungenjalo yiza emngcwabeni ngokwakho, uya kuyibona","Ndiyazi umnini wale nkampani","zinomsindo izihlobo!","Ndiyazi ukuba lo Mnu Ergün ukhona ngokweneneKwaye ke kuya kubakho iimpendulo ezininzi. Yonke inokuba iyinyani, kodwa ngoku ekubeni sazi malunga nobukho bezulu kwaye sazi ukuba imithombo yeendaba yentlalo ijongiwe kwakhona ngabasebenza ngeengcali, asisazi ngokuqinisekileyo. Ngapha koko, abachasi banokuthi banikwe ibhegi yemali kwaye babe nesazisi esitsha eArgentina, kodwa babekele ecaleni. Amanzi enzonzobila angenza nabuphi na umlinganiswa, kubandakanya imbali yonke, abonakale enokwenzeka (efundwe apha ukuba oko kusebenza njani). Unokusebenza kunye nomdlali wezinto ozenzayo njengomenzi wobubi, ukuze ungazi. Awungekhe uyitsho. Yonke into esiyaziyo, siyayazi kusetyenziswa amajelo eendaba kunye nezentlalo. Ngokobuchwephesha, kunokwenzeka ukuba ubeke ii-PsyOps kunye kwaye ukuba ungayisebenzisa ukwazisa umthetho ongasokuze wamkelwe, ulufezekisile usukelo lwakho.
Eli tyala linokukhokelela ngokulula kwimowudi yokwamkelwa yokuthatha nayiphi na into yokucinga enengxaki okanye nabani na ongabambisani nomgaqo-nkqubo wombuso. Emva koko ubeke isiseko sesimo samapolisa e-fascist kwijakethi yoboya obucocekileyo: ingcuka enxibe impahla yegusha.
Sele siqhele amapolisa asicela ukuba asichonge. Oko kwenzekile phantsi kolawulo lwe-'40 / '45. Ndikhumbula ixesha apho wawunokuhamba nje esitratweni ngaphandle kwepasipoti okanye isazisi kwaye kungekho namnye owakhe wabuza ngako. Ungaze, ungaze, hayi iminyaka! Yayingumbandela nje ongekhoyo; into engathandekiyo. Awukhange uphathe ipasipoti okanye isazisi kunye nawe. Ulutsha lwanamhlanje lusetyenziselwa ukuba izazisi zabo zihlale zisepokothweni yabo, ngenxa yazo zonke iintlobo zomthetho ezinyanzelise oko. Chonga xa uthengisa iziselo, xa ungena kwi-disco kunye namanye amatyala amaninzi. Kwaye sicinga ukuba kuyinto eqhelekileyo, kuba bekukho iingxaki ezazinyanzelisa ukwenziwa kwalo msebenzi. Yiloo nto kanye esiyibonayo. Kwinkqubo yokusebenza kwengqondo (PsyOp), ingxaki yempembelelo enkulu yezentlalo ihlala idalwa, ke impendulo ibangelwa (ngeenkqubo zeTV zeTV ezifana noPauw kunye neengxoxo zosasazo lwendaba) emva koko isisombululo siyanikezelwa. Leyo isoloko ingumthetho onzima: ngakumbi amapolisa.
Kwixa elizayo elizayo, kungekuphela nje ukubonisa i-ID yakho lulwaphulo-mthetho, kodwa ungakhutshelwa ngaphandle kwendlu uxolelwe kwaye unganiki sizathu. Emva koko unokuphelela kwigumbi le-GGZ ngaphandle kweefestile kwaye unokunikwa unyango olukwenza uzive unesiyezi. Ukuba, emva kweeyure ezimbalwa, ubuhleli kwigumbi elingenazifestile kwaye uqala ukubonisa indlela yokuziphatha engaqhelekanga (umzekelo, uba yi-claustrophobic), oko kuya kuthetha ukuba ngokuqinisekileyo uya kuya kwi-GGZ mall mill. Akukho khwela likhala kuyo. Kwaye uwamkele wonke umthetho owenze ukuba kwenzeke, kuba bekuyimfuneko kakhulu; malunga nokubulala uPathé, ngenxa ka-Anne Faber, ka-Ruinerwold, kuba, ngo,. Ijongeka ngathi yibhanyabhanya eyoyikisayo Indawo apho wonke umntu uhlala khona ukuze abukele imovie.
Sikubheja kwakhona ucinga kwividiyo engezantsi: "Indoda leyo kufuneka ukuba iyifumene, kufuneka ukuba ibonakalisile indlela yokuziphatha ethandabuzekayo."
Kuninzi kakade ibhaliwe malunga neNkcazo yezinto zonke '
tags: i ngxolo, eziziimbalasane, ifilimu, waphendula, tshutshiswa, Gina, Groningen, UMarinus, eendaba, bulala, Pathe, psyop, zentlalo
27 Oktobha 2019 kwi-11: 50
Ewe wayeneminyaka eyi-33 ...
27 Oktobha 2019 kwi-12: 47
Inani i-33 lisalathiso kwimibutho eyimfihlo apho zonke iinkokeli kwezopolitiko, ezomthetho, ezomthetho kunye namajelo eendaba ziyinxalenye.
Ngabo abagcina iTrimanshow: Inyani njengoko uyibona.
27 Oktobha 2019 kwi-13: 08
Ukhumbule ... iklip yevidiyo yabanjwa ngamapolisa eMichigan emva kokungakhombisi isazisi, isenokuba ibonelelwe ukuba ibeke ababukeli baqhele imeko yamapolisa kwaye woyike xa ungazibandakanyi .
Ngumzekelo olungileyo wamapolisa ngakumbi nangakumbi, njengoko sibona ngakumbi eNetherlands. Uza kwamkela yonke imithetho efunekayo koku, kuba uthatha ubofu ngamehlo 'eengxaki ezinkulu zempembelelo zentlalo' ezivela kumajelo eendaba.
27 Oktobha 2019 kwi-13: 16
Abemi babonakala belungele ukungaxolelwa ukuvalelwa entweni okunokwenzeka "ngabantu abadidekileyo" (inokuba ilebheli yomntu wonke ... kwindawo eyayisakuba yiSoviet Union yayibizwa ngokuba ngabaphikisi)
27 Oktobha 2019 kwi-13: 23
Ndicinga ukuba ubunjani buka-Ergün S busekwe kwi-Kramer evela kwiSeinfeld 😉
27 Oktobha 2019 kwi-14: 44
UKramer wayengumntu odidekile ..
27 Oktobha 2019 kwi-15: 16
“Umfazi, onikwe umyeni wakhe esibhedlele, uchaza ubumelwane bodwa. "Kakhulu 'kukuphila kwaye ukuvumela ukuba uphile apha. Akukho kuhlambalaza ukujikeleza okanye ukuhleba malunga nomnye. Ngasekhaya ngalinye linesiqwenga somhlaba kwaye uhlala kuso ngokukodwa. Kwenzeka into efanayo nakwabo babuleweyo. "
Ewe ewe .. ke abamelwane babengabazi ngenene .. okanye nyani ..
Kulungile awazi, akunjalo?
27 Oktobha 2019 kwi-18: 31
Kuyakhawuleza kwaye kulula ukuyazi .. ukuba ufuna ukuyibona! Martin, bendikulandela ixesha elide, ukusukela okoko wandibonisa ubunyani buka Micha Kat, ndikuhlonipha kakhulu kwaye ndifunde lukhulu kuwe! Enkosi
27 Oktobha 2019 kwi-22: 24
Uza kufunda njani uJohn de Mol ngale nto? Ngoku abamelwane ngequbuliso bawazi kakuhle amaxhoba kakuhle?!
27 Oktobha 2019 kwi-22: 27
Jonga ukusuka kumzuzu 9: 09…
27 Oktobha 2019 kwi-16: 09
Imveliso enjalo ephilayo kwi-cinema ... kuhle
30 Oktobha 2019 kwi-06: 57
Imizuzu ye-3.33, ayizufumana naphi na iSanti eyi-crazier.
27 Oktobha 2019 kwi-20: 46
UDe Telegraaf yiglasi yeglasi kunye ne-enceclopedia, yonke imihla,
Inokwenzeka njani loo nto?
UDe Telegraaf uyazi YONKE into? njalo! kwangoko!
Ii-Super Columbo's, iiSherlock Holmes abanazo apho.
Bayazi ukuba bacocekile kuloo bhanyabhanya.
Bayazi ukusuka kubantwana be-Sp Spook (eDrente) ukuba bafundile kwaye i-telegraaf kuphela komntu onokuthi afunde izikhundla ze-facebook ezikhutshiweyo zabantwana. (ikhonkco elivulekileyo apha ngezantsi ngeendlela ze-incognito)
kodwa ungalibali iAmsterdam, Hugo de Groot isikwere.
UJohny van de H kunye no-welly kunye no-Schoolenberg banebhola yedayimane ekungekho namnye umntu banayo, baluhlanga luka-Agatha Christie lwehlabathi, yonke imbali bayazi kwangoko. (Oko kuthetha ukuba kukuphika)
Ndifuna ukubheja ipakethe yobisi, ndithumele uJohny van de H ukuba apakishe ubisi, aze abuye nebhotile ye-coke, isesilwanyana. Mhlawumbi uMatijs N uza kubuya ephethe iipakethi zantandathu zefransi, ke ngewayebe enze konke okusemandleni akhe.
UDe Telegraaf uhlala eyazi yonke into kwiiyure ezimbalwa! kuhle, molo
28 Oktobha 2019 kwi-13: 52
Ndingongeza kululuhlu lwam: ilungelo lokwala ukwamkelwa kwiziko leengqondo ngaphandle komyalelo wenkundla kufuneka ukhuselwe.
Ilungelo lokwala iyeza kufuneka lihlale lisebenza ngaphandle kokuba ijaji icinga ntoni.
(ukuzenzela ngokwasemzimbeni nangokwengqondo)
Ndifuna ukwazi ukuba mangaphi amalungelo kolu luhlu malunga neminyaka ye-10 asasebenza, isalathiso esimnandi semeko yangoku yemicimbi yoluntu.
28 Oktobha 2019 kwi-18: 31
Ingxelo ye-AD ithi: "I-GGZ ibifuna ukunyanzela ukubulawa kwabantu kwimiboniso bhanyabhanya ukuba inyangwe". Njengoko ndatshoyo: "Ingxaki, ukuSabela, ukuSombulula" ngokubhekisele kwi-Edith Schippers bill evela kurhulumente odlulileyo. PsyOp?
N. Leeman wabhala wathi:
28 Oktobha 2019 kwi-23: 12
Indlela elungileyo sele inikiwe ngomthetho wabanikeli. Ubukhosi bomzimba butshatyalalisiwe ngokusemthethweni.
Ugonyo olunyanzeliswayo lukho ngoku kwiveki ... kwaye uluhlu lweminqweno alugqibi.
30 Oktobha 2019 kwi-07: 01
Ukulingana kwe-ff ngokulinganayo, kwaye ugqibe.
30 Oktobha 2019 kwi-07: 06
KULULA NGOKUGQIBELELEYO, Yekopi yabantwana Ukhe Wabona!,
30 Oktobha 2019 kwi-21: 07
Inqaku le-blogger (uMartin Vrijland apha) sele esibonisile ukuba umcimbi ulungile
ayithembeki kwaye iqinisekiswa yi-disinfo ngokudibeneyo ne
shiya iinyani ezahlukeneyo.
Ngaba uMarinus akanaso isibongo?
Kutheni le nto uGina engenagama lokugqibela? kodwa iminyaka
Unyana akafundanga eKorea?
Kutheni uhambo oluthe cwaka lubonakala luhlekisayo, kubonakala ngathi, lukwabalulekile nasekuqhubekweni.
Kutheni yonke into iyaziwa malunga nomenzi wobubi kwaye phantse akukho nto malunga namaxhoba, akunakwenzeka
Ngaba abantu bayakhathazeka? Ngokwenqaku elingezantsi (ikhonkco) ngokutsho kommelwane, uthini ummelwane, ngu-goddamn HORRIBLE ukuba yinyani, yintoni ebanjiweyo, uyothuke xa umgqomo utya isiraphu epanini yakho, kodwa woyikiswa yiyo Umsitho owoyikekayo.
I-Sober Groninger yenza ukuba izwi lakho liviwe, liyanuka!
30 Oktobha 2019 kwi-21: 14
Khohlwa ukuba kutheni, uyabuza, akukho sithandwa
Ifoto yesibini esisusa ukucoca uMarinus noGina kwiBios van Pathee eGoningen….
Kulungile kunye neminye imibuzo emininzi evulekileyo
adje wabhala wathi:
30 Oktobha 2019 kwi-23: 20
Ewe, umkhwe wam ungumanejala kuleyo bhanyabhanya kwaye wayengumhlobo wesi sibini.
Ndiza kumbuza ukuba ucinga ukuba yi-psy-op na okanye hayi.
Akubonwa xesha elunxwemeni. Imibuliso!
31 Oktobha 2019 kwi-10: 17
Ngubani igama-ke lomntakwenu, emva koko ndingambiza? Ngaba wawungekhe ubuze ukuba ngelo xesha kwenzeka ngalo iAdje?
Uyazi ukuba wayengumhlobo nesi sibini, kodwa awukathethi naye ngalo nto?
Wazi njani ukuba wayengabahlobo nesi sibini?
Kwaye ukuba zikhona kwaye wayengabahlobo kunye nazo (ezithi, ngokoluvo lwam, sele zahlukile, kuba ngokufuthi abaphathi ababahlobo ngokuthe ngqo nabacoci), kusenokwenzeka ukuba kunjalo yi-PsyOp.
Ngaba iAdje mhlawumbi yiraw?
31 Oktobha 2019 kwi-17: 32
Ndiphumile nje kwaye andimazi u-'Adje ', naziphi na izimvo zangaphambili azibonwanga.Akunokwenzeka ukuba ungomnye wabafana beskripthi okanye usebenze njengesicaka samakhwenkwe eskripthi, abacebisi kunye nabakhohlisi . Bahle kakhulu kuloo nto kuba abantu baginye yonke into.
31 Oktobha 2019 kwi-23: 06
Kuyinyani okanye bubuxoki ... psy-op okanye hayi
"Ungaze uvumele ingxaki elungileyo yokulahla inkunkuma"
Ayisosibali sam .... Kodwa yonke into ithethiwe ngayo.
Ngengozi; ngabom ukuthintela kwaye / okanye ukuququzelela kuyafana nokwenza!
« Uhlaselo lobugwenxa beLondon, iManchester, iParis, iBarcelona kunye neRotterdam kwi-23 kunye ne-24 ngo-Okthobha? (UPHAKATHI))
Umngxunya omnyama othwethwe yi-NASA ngokwenene yiplasma yeplasma »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.800.103